Babylon7+Oxofrd,MZ,Padonma Dictionaries + Crack — MYSTERY ZILLION
Babylon7+Oxofrd,MZ,Padonma Dictionaries + Crack
June 2008 edited June 2009 in File Request
Babylon7+Oxford Dictionary ပါ Crack ပါ ပါပါတယ်
Rar File ထဲမှာ MZ Dictionary ကော Padonma Dictionary ကောထည့်ပေးထားပါတယ်
Crack က Merriam-Webster Collegiate Dictionary & Britannica Concise Encyclopedia Dictionary တွေကိုပါ Crack လုပ်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒိ Dictionary တွေကတော့ မလိုအပ်ပဲ File Size ကြီးမှာဆိုးလို မထဲ့ပေးတော့ပါဘူး Add Dictionaries ကနေ Install လုပ်လိုရပါတယ်
Dictionaries အားလုံး Install လုပ်ပြီးမှ Crack ကို Run ပါ
Babylon ကိုတင်ပြီးသွားရင် မမေ့ရမှာက Update ကိုပိတ်ထားပေးပါ
MZ Download Center မှာ Babylon7 crack ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခု version နဲ့သုံးလိုမရတော့ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်တင်ပေးတာပါ
Download Center မှာလဲတင်ပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော်လဲကျေးဇူး ... ဘေဘီလုံကို လိုချင်တဲ့လူတွေ RS ကဒေါင်းခိုင်းတုန်းက ဒေါင်းပေးဘူးတယ် ကိုယ်တိုင်တော့ တစ်ခါမှ သုံးဘူးသေးဘူး၊ ခုတော့ All in One လုပ်ပေးထားလို့ စမ်းကြည့်တာ မြန်မာ Dictionary တွေ တော်တော်ကောင်းတာဘဲ စာလုံးတချို့လိုနေသေးတာကလွဲရင်ပေါ့ ..။
၀မ်းသာအဲလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ..။
ဒါကတော့ Babylon Installation Manual ပါ
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်မှလဲ ပြန်လည်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း (ဟီးဟီး ကျေးဇူးတွေ များကုန်ပြီ ) :d:d
i can't download babylon. :O
အမ်။ ရပါတယ်ဗျ။ နောက်ရဝူးနော် ။ ဒါပေမဲ့ Adrive နဲ့ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော်ဘယ်က ပြန်တင်ပေးရမလဲ။အကိုအဆင်ပြေမဲ့ hosting ကိုပြောလေ။ ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်။
mediafire နဲ့ upload လုပ်ပေးပါ
Adrive နဲ့ အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျာ:((:((:((
babylon threat ကို ရှာနေတာကြာပြီ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်...
i'm waiting for new download line (:((:((:((:((
Oops. Sorry.I forgot to check this post.Wait for awhile . I m uploading now. How about zshare ? Mediafire is very slow uploading speed.
ruirui wrote: »
4shared ကဆိုရင်ကောအဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ :d
ကိုတက်လူရေ ကူညီလိုက်တယ်နော်။ ကိုတက်လူရဲ့ file ပါ ဒေါင်းပြီး4shared ကနေပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ :67:
ကျေးဇူးပါ ကိုထွက်ပေါက်ကြီး။ ကျွန်တော် အပ်လုပ်လုတ်တာ သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ အတော်ပဲ။ ကျွန်တော် အခုမတင်တော့ဘူး။ သူအဆင်မပြေဘူးဆိုမှပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်တော့မယ်။
ဒီမှာ ဇက်ရှယ်နော်။ အပ်လုပ် လုတ်တာခုမှပြီးလို။ တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဆင်မပြေရင်လဲ ပြန်ပြောနော်။
ကိုထွက်ပေါက်ရေ ကျွန်တော်ပိတ်ခါနီးမှ ပြီးသွားလို တင်ပေးလိုက်ပြီ။ ပြောတော့ 8M/s တဲ့။ ဒေါင်းလုပ်တော့ကောင်းပါတယ် အပ်လုတ်က စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ (:((:((:((
thanks so much :77::77::77:
ကျနော့ကိုပြောထားတဲ့ Longman activator လေးရှာမတွေ့ဘူးလားခင်ဗျာ။ Babylon တွဲသုံးတဲ့ဟာလေးလေ။ ပြောတာပြောရတာ ကိုတက်လူ အလုပ်ရှုပ်နေရင်တော့ ရပါတယ်။ အားတဲ့ အချိန်လေးရှာပေးပါနော်။
:5:ကျနော် .. စက်မှာ Microsoft word and ကျန်တာတွေ ကို လုံး၀ ဖွင့်လို့ကိုမရလို့ပါ..
သုံးတာ က Vista ပါ .... အဲဒါ ... မိုက်ခရိုဆော့ ကို ဖွင့်တိုင်း .. သူက ...
produce key ဘဲတောင်းတော့ .. ဘယ်က သွားရှာနိုင်ပါ သလဲ ... မိုက်ခရိုဆော့၀ပ် ..နဲ့ ကျန်တာရမ်း နိုင်အောင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိတဲ့ သူများ ကူညီဖြေပေးကြပါ ...နော် .:D
နောက်တခုက .. rar file တွေလဲ ဖြေလို့ကိုမရဘူး.. ဖြစ်နေတယ် .. ဗျာ ... လုပ်နည်းလေး တွေ
သိရင်ပြောပြပေးကြပါ ... နော် (
ဘေဘီလုံအတွက့် Merriam-Webster Collegiate Dictionary & Britannica Concise Encyclopedia Dictionary ကို အက်ချင်လို့ ဘယ်မှာ ရနိုင်လဲမသိဘူးဗျာ
အေးဗျာ ကျနော်လည်း အဲဒီစွယ်စုံကျမ်းလေး ရမယ်ဆိုရင် လိုချင်တယ်ခင်ဗျ။ ဝီကီရေးတာတွေ အားလုံးကို မယုံဘူးဗျ။ အန်ကာတာ ဆိုတဲ့ဟာပါရရင်ပိုကောင်းမယ်။
ဘေဘီလုံက ဘာလဲဗျ။ ကျနော်မသိဘူး။ အလုံက မဘေဘီလား။ :d
အခုပဲ ဘေဘီလုံအကြောင်း အရှေ့က ပိုစ့်တစ်ခုမှာ လင့်တွေလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ နားလည်သွားပါပြီခင်ဗျ။ အဘက်ဘက် မှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
Add Dictionaries အပိုင်းကို သိပ်မရှင်ဘူး။ ဘယ်ဟာမှာ Right click အဲဒီဟာပေါ်မှာလဲ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတက်လူရေ..ဘေဘီလုံ ကိုသိထားတော့ကြာပြီ.မသုံးကြည့်သေးတာ..ကျနော်က လင်းဂိုးစ် ပဲသုံးနေတာ...သူလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်...ခရက်လုပ်စရာမလိုဘူ...ဖရီးရတာ.
ဒီနေ ့ကျမှ သူငယ်ချင်းတယောက်စက်မှာထည့်ပေးရင်းနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်လို့ ထည် ့လိုက်တာ.အခုလိုမျိုးလုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ပုံနဲ့တကွ သေသေချာချာရှင်းပြထားပေးတဲ ့အတွက်
ကိုတက်လူရဲ့ စေတနာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.တကယ်လို့စိတ်၀င်စားတယ်ဆိုရင် www.lingoes.net ကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်...
diaster wrote: »
ဘေဘီလုံ ကိုအင်စတောလုပ်ပြီးရင် အောက်က စစ်စတမ် ထရေးမှာ အိုင်ကွန်လေးပေါ်တယ်လေ
အဲဒီပေါ်မှာ ရိုက်ကလစ်ထောက်လိုက်ရင် add dictionaries ဆိုတာရှိိတယ်..အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင် သူ ့webpage ကိုရောက်သွားလိမ် ့မယ်...အဲဒီမှာအပေါ်မှာ add dictionary ဆိုတာကို နှိ်ပ်လိုက်ရင် dictioanay တွေကိုတွေ ့နိုင်ပြီး download လုပ်နိုင်ပါပြီ.....
Babylon Dictionary ကုုိ Mac မှာ သုုံးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
ဘယ်လုုိလုုပ်လုုိ့ ရနုုိင်မလဲ ဆုုိတာ ကိုု ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် ....
ကျေးဇူး ပါပဲ ဗျာ ...
i can't download the file (:((:((
what can i do ? the site says ",The file you are trying to access is no longer available publicly " please help me
I can't download with Adrive. pls upload with others.
အစ်ကိုရေ ifile ကနေတင်ပေးပါလား
zshare ရော 4share ရောဒေါင်းလို့ မရတော့လို့ပါ
အဲလိုကြီး ပြနေတယ်။ ဘယ့်နှယ် လုပ်ရပါ့။
4shared မှာ တင်ထားတာ ဒေါင်းလို့ ရပါသေးတယ်။ ifile ကနေလိုချင်သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။